Ndị na-ese foto na Weebụ | Martech Zone
Tọzdee, Septemba 7, 2006 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Emekarị m anaghị eme nke a. Agbanyeghị, enwere ụfọdụ oge ụfọdụ ọ na-adị m ka m gbalịrị imechi ọnyà m. (Ndị enyi m na ndị ọrụ ibe m ga-agwa gị na ọ na-eme karịa ihe m chọrọ ịnabata). Ebe a na-aga…
N'abalị ụnyaahụ mgbe m yi uwe m na saịtị na mgbakwunye Blaugh, enwere m ahụ efe na nchọta ahụ. Achọtara m Blaugh n'ezie site na ịme ụfọdụ Googling maka eserese blọgụ. Saịtị m chọrọ ụfọdụ ọchị… ee, karịrị m maara banter… otú ahụ ka m chere a katuunu na-agbanwe mgbe ga-abụ ezigbo mgbakwunye.
Cheedị ihe egwu ahụ mgbe nsonaazụ Google m bịara na nke a:
M gaara etinye ntakịrị ihe ngosi na blọọgụ m, mana echere m na ebe ahụ na onyonyo a bụ ikike nwebisiinka. Biko gaa na… opekata mpe iji zute Smaugy, na Office Eel. Anaghị m eme ihe a.
Agaghị m ekwu ọzọ. Aga m alakpu ụra ugbu a. Ka chifoo.
Mpako ụlọ ọrụ
Sep 10, 2006 na 9: 50 AM
Ike Ọjọọ bụ ọkacha mmasị ọkachasị, agbanyeghị na m ga-ekweta na agabeghị m saịtị ahụ nwa oge!
Sep 10, 2006 na 5:07 PM
Amaghị m ihe bụ ihe mwute karịa:
a) Onye na-eche na ndị mmadụ chọrọ katuun dị ka nke ahụ
b) Onwere onye ji oru ha eme ihe?
(Ha anọwo na-azụ ahịa kemgbe 2005…)